जसले कोरेका चित्र हेरेर नेपाल घुम्न आउँछन् विदेशी - समाज - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
जसले कोरेका चित्र हेरेर नेपाल घुम्न आउँछन् विदेशी
कृष्ण आचार्य माघ २४
बीके नरबहादुर लाजिम्पाटस्थित आफ्नो आर्ट ग्यालरीमा घान्द्रुकको परिवेश समेटिएको चित्र क्यानभासमा कोरिरहेका छन्। दाहिनेपट्टी रहेको टेबलमा विभिन्न रङ छन्, हातमा कुची छ भने अगाडि क्यानभास।
आर्ट ग्यालरीभित्र चारैतिर विभिन्न चित्रहरु छन्। अधिकांश चित्रमा हिमाल पोतिएका छन्। लाग्छ, उनको हिमालसँग प्रेम छ।
हिमालको काखमा उनले सुन्दर दृश्य कोरेका छन्। जस्तैः घर, पहाड, वनजंगल, च्याङ्ग्रा, खेतबारी, फूल यस्तै–यस्तै।
उनले क्यानभासमा यति छिटोछिटो कुची चलाइरहेका छन् कि लाग्छ, उनलाई अब कुची, क्यानभास र रङसँग गहिरो प्रेम बसिसक्यो।
सानैदेखि चित्रकलाको भूत सवार
नरबहादुरको सानैदेखि चित्र बनाउनमा रुची थियो। स्कुल पढ्दा उनी कापीका पानामा चित्र कोर्थे। उनका कापीका अधिकांश पाना विभिन्न खाले चित्रले भरिएका हुन्थे।
विज्ञान विषय बढाउने शिक्षकले नरबहादुरलाई नै ब्ल्याक बोर्डमा चार्टहरु बनाउन लगाउँथे। बीके पनि मख्ख पर्थे। साथीहरु यो सब देखेर ईष्र्या गर्थे।
सानैदेखि उनमा चित्रकलाको भूत सवार थियो। यो कुरा उनका बाबुले पनि राम्रैसँग बुझेका थिए। त्यसैले एसएलसीपछि काठमाडौँ आएर चित्रकलामा भविष्य खोज्ने उनको ईच्छालाई बाबुले सहजै स्वीकारे। अझ त्यसअघि बुटवलमा रहेका एक आफन्त (नातामा दाइ) कहाँ चित्रकला सम्बन्धी सीप सिक्न पठाए।
यसको अर्को कारण पनि थियो। तराईका आदिवासी थारु र मधेसीहरुको बाहुल्य रहेको नवलपरासीको सरावल गाउँमा नरबहादुरको परिवारको आर्थिक हैसियत सामान्य थियो।
आफूपछि लगातार ४ बहिनी जन्मिएपछि जेठो छोराको जिम्मेवारी नरबहादुरमाथि थियो। त्यसैले पनि उनी काठमाडौंमा अवसर पाउने कुरामा ढुक्क थिए। अनि केही पैसा कमाएर परिवारमा खुसी छर्ने चाहना थियो।
यस्तै, सपना बोकेर नरबहादुर २०५६ सालमा काठमाडौँ छिरे।
काठमाडौँमा दुई दशक
काठमाडौँ छिरेपछि नरबहादुरलाई यो सहर निकै रमाइलो लाग्यो। पहिलो दिन नै उनले अठोट कसे, अब म यहीँ बस्छु।
उनको रुची फिल्मको पोस्टर र ब्यानर बनाउनेमा थियो। त्यसका लागि दुई दिनसम्म काठमाडौँको गल्ली–गल्ली चहारे। पसलका साहुलाई भेटे, उनीहरुसँग जागिरका लागि हार–गुहार गरे।
तर, सबै सोचे र चाहेजस्तो कहाँ हुन्छ र? उनले जागिर पाएनन्।
घरबाट ल्याएको ५ सय रुपैयाँ सकिएको थियो। रहरको सहरमा आफन्त भन्ने कोही थिएनन्। उनमा छटपटी बढ्दै गयो।
जागिरको खोजीमा भौतारिँदै मित्रपार्क पुगे। बाहिर थुप्रै हिरो–हिरोइनको तस्वीर टाँगेको देखेर उनी केही आशाका साथ एक आर्ट पसलमा पसे। त्यहाँका साहुलाई भेटे। आफूले बाहिर टाँगिएका पोस्टरजस्ता चित्र बनाउन सक्ने बताएपछि साहुले उनलाई एउटा चित्र बनाउन लगाए।
नरबहादुरले बलिउड अभिनेत्री माधुरी दीक्षितको चित्र बनाइदिए। त्यसपछि उनले मासिक दुई हजार रुपैयाँमा साइन बोर्डमा हिरोइनको चित्र कोर्ने काम पाए। त्यहाँ उनले ६ महिनासम्म काम गरे।
सोही दौडान चित्र कला क्षेत्रमा काम गर्ने ‘सर्कल’ सँग आफूलाई समाहित गर्ने काम गरे। ललितकला क्याम्पस भर्ना पनि भए।
क्याम्पस जाँदा उनी ठमेल हुँदै जानुपथ्र्यो। त्यसक्रममा उनले ठमेलका आर्ट पसलमा राखिएका हिमालका चित्र देख्थे। चित्रमा लोभिन्थे, कहिले घोत्लिन्थे।
उनमा त्यस्तै चित्र कोर्ने मोह जाग्यो। ठमेलमा पनि पसलका साहुलाई भेटेर आफ्नो ईच्छाबारे सुनाए। काम गरिरहेको र ललितकला पढेको भनेपछि साहुले पनि सहजै काम दिए।
त्यहाँ मासिक १० हजार कमाउँथे उनी। सो पैसा क्याम्पस पढ्न, आफ्नो खर्च चलाउन र केही बचाएर घर पठाउनसमेत पुग्थ्यो।
एक वर्ष काम गरेपछि नरबहादुरलाई आफ्नै ग्यालरी खोल्ने चाह बढ्यो। उनको गोजीमा ५ हजार रुपैयाँ मात्र थियो। जे त होला भनेर मासिक ५ हजार भाडा तिर्नेगरी लाजिम्पाटमा कोठा लिए।
त्यतिबेला उनमा बच्चापन नै थियो। व्यवसायिक चेत आइसकेको थिएन। तैपनि मासिक २५ हजारसम्म आम्दानी गर्थे। फुर्सदको समयमा वाल पेन्टिङ पनि गर्थे।
यसरी नरबहादुरले काठमाडौँमा दुई दशक बिताइसकेका छन्। अहिले लाजिम्पाटको ¥याडिसन होटल नजिकै उनका दुई आर्ट ग्यालरी छन्।
उनी विशेषगरी प्रकृतिलाई चित्रमा उतार्न रुचाउँछन्। उनले बनाएका चाहे अन्नपूर्ण हिमाल होस् वा घान्द्रुकको चित्र, त्यहीँ पुगेर त्यहाँको परिवशेलाई चित्रमा उतारेका हुन्।
नरबहादुर हिमालको काखमा होस् या विदेश गएका बेला– सुमन्द्रको छालमुनि क्यानभास ठडाउँछन्। अनि कुची चलाउँछन्। एकपटक कोरेको चित्र दिमागमा बसिहाल्छ। यसरी सोही परिवेशका सयौँ चित्र कोरिदिन्छन्।
‘कलामा सुन्दरता’ उनको मूल मन्त्र हो। र, यसका लागि उनी सिपालु पनि छन्। त्यसैले पनि होला, उनका चित्रमा मनमोहकता बढी पाइन्छ। कहिलेकाहीँ मन बहकाउने माध्यम बनिदिन्छन्।
यसरी उनले बनाइरहेको घान्द्रुकको चित्रको पहिलो फ्रेम पनि उनले सोही परिवेशमा कोरेका थिए।
हालसम्म नरबहादुरले २० हजारभन्दा बढी चित्रहरु कोरिसके। त्यसमध्ये २० हजार चित्र बिक्री पनि भइसके। उनको ग्यालरीमा सय रुपैयाँदेखि लाख रुपैयाँ मूल्य पर्नेसम्मका चित्र बिक्रीमा छन्। अर्थात्, चित्र कोरेर उनले सजिलै आफ्नो परिवार पालिरहेका छन्।
नेपालमा हालसम्म १४ पटक एकल चित्रकला प्रदर्शनी गरिसके भने विभिन्न १५ देश प्रदर्शनीकै लागि भ्रमण गरे।
अहिले काठमाडौँका अधिकांश आर्ट पसलमा नरबहादुरका चित्र बिक्रीका लागि राखिएका छन्। दक्षिण कोरियामा भएको प्रदर्शनीमा एउटै चित्र २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्रमी भएको उनुभव उनीसँग छ।
अष्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, कोरियालगायतमा बस्ने नेपालीको घरका भित्तामा उनले बनाएका चित्र टाँगिएका छन्।
चित्र हेरेर नेपाल घुम्न
नरबहादुर आफूलाई घोडाको लगामजस्तो बाँधेर राख्न चाहँदैनन्। देश विदेशका प्राकृतिक मनोरमस्थलहरु घुमेर मस्ती गर्छन्। कमाएको पैसा त्यसमै उडाउँछन्। त्यसैले, उनले धेरै पैसा जम्मा गर्न सकेका छैनन्।
तर, आफू घुमेको ठाउँको चित्र भने उनको क्यानभासमा कोरिन्छ। जिन्दगीको सबैभन्दा ठूलो कमाई यसैलाई मान्छन् उनी।
हिमालको काख, सुन्दर सहर, सामान्य गाउँ जहाँ जान्छन्, उनी हप्तौँ बसिदिन्छन्। चित्र बनाउन आवश्यक सामग्री सँगै लगेका हुन्छन्। त्यहाँका मनोरम दृश्यलाई क्यानभासमा उतार्छन्।
नरबहादुरको चित्र हेरेर थुप्रै विदेशी नेपाल घुम्न आएका छन्। उनले विदेशमा गर्ने चित्रकला प्रदर्शनीमा धेरैजसो विदेशीको नै सहभागिता रहन्छ। नरबहादुरले बनाएका चित्रमा विदेशी नेपालको सुन्दरता हेरेर दंग पर्छन्।
यसरी लोभिन्छन् कि, नेपालको प्राकृति सुन्दरता आफ्नै आँखाले हेर्ने लोभ उनीहरुमा पलाउँछ। त्यसपछि आउँछन् नरबहादुरसँग सम्पर्क गरेर नेपाल घुम्न। उनका चित्रमा उतारिएका बिम्बहरु नेपालको प्राकृतिक सुन्दरताको यथार्थ चित्रण हो भन्ने चाल पाएपछि विदेशी लोभिनु स्वभाविक हो।
पछिल्लोपटक कोरियामा भएको नेपाली चित्र प्रदर्शनी हेरेर थुप्रै कोरियाली नेपाल आएको अनुभव उनीसँग छ। यस्ता कुराले नरबहादुरलाई खुसी दिन्छ।
उनले कोरेका हिमाल र गौतम बुद्धका चित्र थुप्रै विदेशीका घरमा झुन्डिएका छन्। त्यो पनि राष्ट्र प्रमुखदेखि उच्च ओहदाका व्यक्तिको घरमा।
आफ्नो कार्यकाल सकेर नेपाल फर्कनेबेला राजदूतहरु प्राय नरबहादुरका चित्र सम्बन्धित राष्ट्र प्रमुखलाई उपहार दिन्छन्।
चित्रबाट प्रभावित भएर विदेशी नेपाल आउनेमात्र होइन, नरबहादुरलाई विदेशीले आफ्नो देशसमेत लगेका छन्।
१३ वर्षअघि एक कोरियाली कलाकार नेपाल घुम्न आएका बेला नरबहादुरको ग्यालरीसम्म पुगे। नरबहादुरले कोरेका चित्र देखेर उनी यति प्रभावित भए कि नरबहादुरलाई कोरियामा चित्रकला प्रदर्शनी गर्ने अवसर नै जुराइदिए।
चित्र देखेर नरबहादुरसँग प्रेम
नरबहादुरको बिहे आफ्नै फ्यानसँग भएको हो। उनी ललितकलामा ‘ब्याचलर’ पढ्दा उनीभन्दा जुनियर थिइन्, प्रमिला परियार। प्रमिला एकदिन नरबहादुरको ग्यालरी पुगिन्। त्यहाँ उनले बनाएका चित्रहरु देखेर तत्काल नरबहादुरसँग आकर्षित भइन्।
सो आकर्षण विस्तारै प्रेममा परिणत भयो। नरबहादुरलाई पनि प्रमिलाको बानी–व्यबहार मन पथ्र्यो। यसरी प्रमिलाको प्रेमले उनलाई पनि तान्न थाल्यो। र, यी दुई झन्डै ५ वर्ष प्रेम सम्बन्धमा रहे। अहिले बिहे गरेर एक सन्तानका बाबुआमा बनिसकेका छन्।
प्रमिला पनि कुची चलाउँछिन्, चित्र बनाउँछिन्। दुबै मिलेर आर्ट ग्यालरी चलाइरहेका छन्। दुबै एकअर्कालाई आज पनि अथाह प्रेम गर्छन्। र, उति नै प्रेम चित्रलाई पनि।
कुरासँगै नरबहादुर कुची पनि चलाइरहेका छन्। लाग्छ, उनी क्यानभासमा प्रेमका विभिन्न रङ पोतिरहेका छन्।
डेढ घण्टामा उनले सुरु गरेको घान्द्रुकको चित्रले मूर्तरुप लियो। घान्द्रुक जति सुन्दर छ, उनको चित्र पनि त्यति नै सुन्दर!
उनी भन्दैछन्, यसको अझै ‘परिस्करण स्पर्श’ बाँकी छ, आधा घण्टा लाग्छ। अर्थात्, उनी डेढदेखि दुई घण्टामा एउटा सुन्दर चित्र क्यानभासमा उतार्न सक्छन्।
प्रकाशित २४ माघ २०७५, बिहिबार | 2019-02-07 11:27:25